Beko’n'Blues – Efa miketrika ny «Hazolahy» ny tarika Mikea - AO RAHA Gazety Malagasy Online	Ny gazety Ao RahaTahiry
Beko’n'Blues – Efa miketrika ny «Hazolahy» ny tarika Mikea
Taorian’ny fandraisany anjara tamin’ny «Gilitabe» ka niarahany nikalo tamin’i Dama,dia mitety faritra any La Réunion i Théo Rakotovao, ankehitriny. Fitetezam-paritra izay hitohy any Eorôpa amin’ny volana septambra ka hatramin’ny novambra.
tsy ankilan’izay anefa, eo am-pikotrehana ny «Hazolahy», rakikira vaovao heveriny fa hatolotra ny mpankafy amin’ny volana septambra ihany koa ity mpanakanto fantatra amin’ny fiangaliana ny «beko’n'blues» ity. Hiarahan’i Théo Rakotovao sy ny tarika Mikea amin’ ny trano mpamokatra avy any Hollande Music and World, tarihin’i Hans Peter, io vokatra vaovao io.
iavaka amin’ireo rakikira teo aloha (Longo sy Taholy) ity rakikira ity noho ny gadon’ny mozika izay somary ho haingana kokoa. Na izany aza, ho hita amin’ireo hira ao anatin’ny rakikira ny fototra sy ny gadona nentin-drazana ary indrindra ny Kabôsa, izay nandravaka ny hiran’ny tarika Mikea. Eo am-pieritreretana ny famo- karana rindran-tsary vaovao ihany koa i Théo Rakotovao, amin’izao fotoana izao.
Fifaninanana BMOI – Sary 65 voafantina hiatrika famaranana etsy Soarano(0)
Efa nanomboka tamin’ ny 27 marsa ny fampirantiana voalohany isaky ny faritra. Sary 65 no voafantina hiatrika ny famaranana tamin’ny fifa- ninanana saripika niarahana tamin’ny BMOI. Nanom- boka 17 mey teo ary hitohy hatramin’ny 27 mey ny fampirantiana ireo sary ireo, etsy amin’ny Café de la Gare, Soarano. Ny fanehoana ny «rano» amin’ny alalan’ ny sary no notakiana tamin’ireo mpifaninana ary samy niezaka nampivoitra izany ny tsirairay. Naha- tratra 200 ireo namaly ny
Toamasina – Nalai-nisaraka i Nantenaina sy ireo mpankafy azy(0)
Efa ela tsy nifankahitana. Nalai-nisaraka i Nantenaina sy ireo mpankafy azy nandritra ny seho voalohany niarahany tamin’ny mponin’i Toamasina, ny alahady lasa teo, tao amin’ny kianja mitafon’i Soavita, tao anatin’ilay hetsika «Pentecôte maresaka à Tamatave». Porofon’izany, dia saika niarahan’ity mpanakanto ity nikalo tamin’ireo mpijery ny ankamaroan’ireo hira nokaloina ka tao anatin’izany ireo hira efa voarakitra tamin’ny rakikira roa efa navoakany toy ny «Tambitamby», «Zanaka amba­nivolo», «Fahanginana», «Saribamanga»… Anisan’ny tena nahoraka kosa ary nangatahin’ny mpijery ny namerenana azy ny «Sentosento», izay niarahany nikalo tamin’i Frances J, izay sambany niaka-tsehatra tamin’ny fampisehoana. Nialoha an’i Nantenaina, dia nisantatra ity seho ity i Shyn, izay anisan’ireo mpanakanto sangany sy manana ny lazany koa amin’izao fotoana, any amin’iny faritra Atsinanana iny. FR
zavakanto, Mpanoratra Rijakely, 05.07.2012, 09:53	FIARAHAMONINA